Wasaarada Caafimaadka oo shaacisay in kiiskii labaad ee coronavirus laga helay Mogadishu… – Hagaag.com
Wasaarada Caafimaadka oo shaacisay in kiiskii labaad ee coronavirus laga helay Mogadishu…
Wasaarada Caafimaadka Xukuumada Soomaaliya ayaa goordhaw shaacisay in qofkii labaad oo ku sugan magaalada Muqdisho laga helay caabuqa Coronavirus kadib baaritaan lagu sameeyay.
Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Fowsiya Abiikar Nuur ayaa sheegtay in caabuqa Coronavirus laga helay mid kamid ah afar sargaal oo dhawaan tababar kusoo qaatay dalka Talyaaniga dibna ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Waxa ay sheegtay Wasiirka Caafimaadka in muwaadinkan Soomaaliyeed ee laga helay Coroanvirus in dowlada si gaar ah gacanta ugu heyso ayna la tacaali doonto xaaladiisa caafimaad.
Ninkan laga helay Coronavirus ayaa kamid ahaa afar sargaal oo kasoo laabtay dalka Talyaaniga oo tababar ay kusoo qaateen, waxaana saraakiishan markii Muqdisho kasoo degeen lagu karantiilay goob gaar ah si loola socdo xaaladooda caafimaad.
Wasaarada Caafimaadka ayaa horey u xaqiijisay in Coronavirus laga helay qof ka yimid dalka dibadiisa gaar ahaan Shiinaha, waxa uuna kiiskan maanta soo shaac baxay noqonayaa kii labaad ee laga helo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho.